IMEYA YASE-NMB IXWAYISA NGE-COVID ENGALAWULEKI ENINGIZIMU AFRIKA YONKE | Scrolla Izindaba
IMEYA YASE-NMB IXWAYISA NGE-COVID ENGALAWULEKI ENINGIZIMU AFRIKA YONKE
Ebeka icala ngqo ezinyaweni zabahlali bendawo, iBamba leMeya uTshonono Buyeye uthe uzokwamukela imithetho eqinile ye-Covid-19 e-Nelson Mandela Bay.
Uxwayise ngokuthi ngaphandle kwemithetho eqinile kuleli dolobha – manje eseliphezulu kakhulu ngalolu bhubhane – “leli gciwane lizosabalala ngokungalawuleki ezweni lonke”.
UBuyeye uthe: “Abantu bafa cishe zonke izinsuku futhi kusezandleni zethu. Kumele nje, kanye nje, sidele izinto esizijwayele ukwenzenza ukusindisa izimpilo zabantu.”
Uthe imibuthano yokuzijabulisa iseyinkinga enkulu, wengeza ngokuthi “asikayeki ukuqinisa umthetho emasontweni nasemingcwabeni ngoba leyo mibuthano kungaba yimithombo ebalulekile yokusabalalisa leli gciwane”.
Ubekhuluma ngamavidiyo nezithombe zemibuthano yomphakathi enganakekile yabantu abenza amaphathi ezindaweni ezifana naseZwide nase-Motherwell.
UBuyeye uthe izinga lokutheleleka edolobheni lisakhuphuka abayizi-3,876 abaqinisekisiwe mhla zingama-29 kuLwezi. I-Uitenhage ihamba phambili ngabantu abathelelekile abangama-514. I-Motherwell iyinkinga enkulu njengoba inavantu avangama-275 abaqinisekisiwe lapho ngeSonto.
“Kudingeka imigomo eqinile edolobheni futhi imibono yethu sayifaka kuNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize nakwabanye ababambe iqhaza ngesonto eledlule. Wonke umuntu uyasazi isimo.”
USihlalo Wokuphathwa Kwezinhlekelele Kamasipala uShane Brown uthe: “Izibhedlela ezizimele sezifinyelele ezingeni eliphezulu ukwelapha i-Covid-19. Yize izibhedlela zikahulumeni nesibhedlela esizimele zingagcwele kakhulu kodwa abasebenzi abanele ukwelapha iziguli ngenxa yegciwane kanye nezinye izinselelo ezihlobene nomsebenzi.”